Taliyaha booliska dalka iyo taliyaasha gobolka Baay oo ka arrinsaday amaanka Baydhabo (Dhegeyso) – Radio Daljir
Taliyaha booliska dalka iyo taliyaasha gobolka Baay oo ka arrinsaday amaanka Baydhabo (Dhegeyso)
Oktoobar 22, 2013 5:38 b 0
Baydhabo, October 22,, 2013 – Magaalada Baydhabo ee xaruunta gobolka Baay waxaa saacadihii tegay kulamo dhinaca amniga ah ku qaatay taliyaha booliska Soomaaliyeed, Cabdikaxiin Daahir saacid iyo taliyaasha qaybaha booliska ee gobolka Baay.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Baay Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa waraysi uu siiyey radio Daljir waxaa uu ku sheegay in ay kulamo la qaateen taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka, isla markaasna ay diirada saareen illaalinta amniga iyo in xasilooni laga dhigo Baydhabo iyo degmooyinka kale ee gobolka.
?Inta badan amniga magaalada ayaa diirada la saaray oo aan ka arrinsanay waana u sheegnay caqabadaha jira iyo horumarka la sameeyey intabada, taliyuhu waxaa uu booqday meelo muhiim ah oo magaalada ka tirsan.? Ayuu yiri Taliye mahad Cabdiraxmaan oo la hadlayey idaacada Daljir maanta.
Taliyaha ayaa ugu dambayntii ka hadlay sida ay tahay xaalada guud ee gobolka Baay isagoo xusay in guulo laga gaaray dhinaca amniga, marka laga reebo mararka qaar ay dilal qorshaysan iyo qaraxyo yar yar dhacaan, Mahad ayaa cadeeyey in ciidamadu markasta heegan ku jiraan.
DHEGEYSO: Weriye Iimaan Jaamac oo daljir ka tirsan ayaa waraystay Taliye Mahad Cabdiraxmaan
Madax isku dhaf heer caalami ah oo maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada hoose